Shan waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal xalay gaartay Final-ka Europa League… (Maxay ka dhignayd saddexleeydii Aubameyang?) – Gool FM
Shan waxyaabood oo laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Arsenal xalay gaartay Final-ka Europa League… (Maxay ka dhignayd saddexleeydii Aubameyang?)
(Valencia) 10 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xalay iska xaadirisay kama dambeysta koobka Europa League kaddib markii ay lugtii labaad ee semi-final ka adkaadeen Naadiga Valencia.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Mestalla ee dalka Spain ayaa Arsenal waxa ay ku soo adkaatay 4-2 iyadoo marti ah, taasoo ka dhigan inay cel-celis ahaan labadii lugood ee afar dhammaadka tartankan ay ku badisay 7-3.
Kooxda Valencia ayaa xalay labada gool ee kulankan lugta labaad waxa ay ka heshay Gameiro daqiiqadihii 11’aad iyo 58’aad.
Gunners ayaana final-ka Europa League ku gaartay saddexleey uu u saxiixay kulankii xalay Pierre-Emerick Aubameyang iyo hal gool kale oo ay ka heshay Alexandre Lacazette.
Final-ka tartanka Europa League ayay Arsenal dabayaaqada bishan waxa ay la ciyaari doontaa naadiga ay ka wada dhisan yihiin Magaalada London ee Chelsea.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa noqday ciyaaryhankii ugu horreeyey ee tartammada Yurub oo saddexleey u dhaliya kooxda Arsenal, tan iyo Lucas Perez oo hat-trick u dhaliyey kulan ay booqdeen Basel oo ka tirsanaa Champions League bishii December ee sanadkii 2016-kii.
>- Arsenal ayaa gaartay final-ka tartan Yurub ah markii ugu horreysay muddo 13-sanadood ah kaddib, markii ugu dambeysay oo kama dambaysta tartan Yurub ah ay gaaraan waxa ay ahayd sanadkii 2006 markaasoo ay Final-ka Champions League ku wajaheen Barcelona.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyey 29 gool tarammada oo dhan xilli ciyaareedkan Sergio Aguero oo dhaliyey 31 gool ayaa ah ciyaaryahan kaliya ee ka badan marka la eego xiddigaha Premier League.
>- Kevin Gameiro ayaa gacan ka geystay 11 gool 12-kiisii kulan ee uu garoonka kooxdiisa ku dheelay tartanka Europa League, isagoo dhaliyey 10 gool mid kalena caawiyey.
>- Arsenal ayaa marnaba ka harin tartan Yurub ah oo aan laga reebin, marka ay lugta hore ku soo adkaadaan labo ama saddex gool, waxaana ay sidaan sameynayaan 28 kulan.
Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Chelsea oo iska xaadiriyey finalka tartanka Europa League... +SAWIRRO